MoeMaKa Radio & Multimedia - ၈၈ အရေးတော်ပုံ
မာတိကာ ၈၈ အရေးတော်ပုံ
Maung Maung One - 23 year ago 8888 (Part 6)
အဲဒီလို ကြေညာလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ … ရပ်ကွက်အသီးသီးက လူထုက သူတို့နယ်မြေတွေကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ … သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ၊ ကောင်စီတွေ၊ ရဲတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကို လုံးဝကို ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မပြုတော့ဘူး … အကျိုးဆက်က ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ဈေးဝယ်စားစရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး … အဲဒီကြေညာချက်ကို လက်ကမ်းစာစောင်တွေနဲ့ပါ ဝေတော့ … စာရိုက်တဲ့သူက ၂/၈၈ မှာ မျဉ်းစောင်းက ပါမလာဘူး … လူထုက ဘယ်လို ကောက်ချက်ဆွဲကြသလဲ ဆိုတော့ .. အစိုးရက ပိုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်တာ လူထုက မလိုက်နာဘူး .. ကျောင်းသားတွေက ကြေညာချက် ၂၈၈ ထုတ်တာ .. အကုန်လိုက်နာကြတယ်ဆို .. ပြောဆိုနေကြတာ .. ကျနော်တို့တောင် သူတို့ပြောမှ သဘောပေါက်တယ်။
Maung Maung One - 23 year ago 8888 (Part 5)
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် - အပိုင်း (၅)
Maung Maung One - 23 year ago 8888 (Part 4)
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် - အပိုင်း (၄)
Maung Maung One - 23 year ago 8888 (Part 3)
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် - အပိုင်း (၃)
“၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ .. ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံဆိုတာ … တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကနေ .. ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ .. တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ .. လူထုတော်လှန်ရေးကြီး ဖြစ်တယ် .. မင်းမဲ့စရိုက်တွေနဲ့ ပရမ်းပတာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ .. ဆူပူအရေးအခင်း မဟုတ်”
၂၃ နှစ် ရှစ်လေးလုံးသွေးကြွေးများ
ရာသီစက်ဝန်း ဖြစ်ရပ်မျိုးစုံ အဖုံဖုံကို
ဗမာ့သမိုင်းမှာ သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်လေပြီ။
ဖောင်ဖျက်ကြစို့ .... အင်ဒရီယာ
Bermua - cartoon
တချိန်ကျောင်းသား ... ခုကျောင်းသား (၂၃ နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ အမှတ်တရ)
ကာတွန်း - ဘီရုမာ
Ashin Kaung - Poem
သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၀၁
ဒုက္ခိတနဲ့ အိမ်ခြေ ယာခြေမဲ့အဆုံး
Daung Ni - 8888 Poem
ဘဝ ၈၈ ဂါရဝ
Ni Lwin Thwe (Dathanika) - 8888 Poem
(၈. ၈. ၈၈) ရှစ်လေးလုံး
Saung Luu _ 8888 Poem
ထားပါတော့ … ကျဆုံးလေပြီးသော ရာဇဝင်ထဲမှာသာ ထားလိုက်ပါတော့ …
ဘဝမှာ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်နာနေရတာနဲ့
လုပ်သင့်တာ မဖြစ်ခဲ့ရဘူး …။
မြှားပစ်သူမုဆိုး ကျွန်တော်မျိုး ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်လိုဘူး။
Htoo Aung _ shot in the back ghost story the ghost with open wound in the back how?
ကျနော် ခပ်ငယ်ငယ် သတ္တမတန်း ကျောင်းသားလောက်ကဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။ တနေ့သော ညနေကျောင်းဆင်းချိန်၊ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက်အုပ်စုသည် အခြားသူများနှင့်ရောနှော၍ စကားတပြောပြောဖြင့် ကျောင်းခန်းတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းဝင်းအပြင်ကိုပင် မရောက်သေး။ မိုးကလေးက တဖွဲဖွဲကျနေသည်။ ဘယ်ကနေ စကားဆက်သွားသည် မသိ၊ သူငယ်ချင်းတယောက်က ကောင်မလေးတယောက် သူရဲခြောက်ခံရပုံကို ပြောပြတော့သည်။
“အခုလို ကျောင်းဆင်းချိန်ပေါ့၊ ကျောင်းသူလေးတယောက်ဟာ ကျောင်းနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှ ကျောင်းခန်းထဲမှာ ကွန်ပါဗူးကျန်ခဲ့တာကို သတိရတယ်။ ဒီတော့ သူ့အဖော်တွေကို လမ်းမှာပဲစောင့်ခိုင်းပြီး သူက ချက်ခြင်း လှည့်ပြန်ယူတယ်။ သူတို့ကျောင်းကလည်း ဒို့ ကျောင်းလိုပဲ နှစ်ထပ်ကျောင်းကြီး တဲ့။ ကောင်မလေးအခန်းက အပေါ်ထပ်မှာ။ ကျောင်းဆင်းတာ မကြာသေးတော့ ကျောင်းဝင်းတံခါးမကြီးလည်း မပိတ်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ လူက ရှင်းနေပြီ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေတောင် ပြန်ကုန်ပြီ။ သူ အောက်ထပ် လှေကားရင်းနားရောက်တော့ ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးက ခပ်ရွယ်ရွယ် ဦးလေးတယောက်ကို တံမြက်စည်း လှဲမလို့ ပြင်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ သူလည်း အဲဒီ ဦးလေးကို ကွန်ပါဗူးကျန်ခဲ့လို့ ပြန်တက်ယူမယ့်အကြောင်း ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ လှေကားကို ခပ်သွက်သွက်တက်ခဲ့တယ်။
8. 8. 88 - Daung Ma Lay (Mandalay)
မမေ့အပ်တဲ့ ရှစ်ရက် ရှစ်လ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
ရဟန်း၊ သံဃာ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား
Nay Thwin - 20 years
သြဂုတ်လ ၅၊ ၂၀၁၁
အ၀လွန်ရောဂါသည် .... ။
ပုံကို ဒီနေရာ ကယူပါတယ်။
“ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်ကဗျာ” လို့ အမည်ပေးထားတယ်။
ရှစ်လေးလုံးနဲ့ သိပ်ဆိုင်လှမယ် မဟုတ်ဘူး။
Aung Way - 88 River
88 Generation Students' Poem - Students Write 8888
ရှစ်ရက် ရှစ်လ ရှစ်ဆက်ရှစ်
ကျောင်းသားစိတ်နဲ့ ရေးထွင်းခဲ့တဲ့ ကျောက်စာ
သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၁
August Songs - Kamar Pale
သြဂတ်စ် … သီချင်း
၂၃ နှစ် အလွမ်းနဲ့
Result of 8888 Revolution - Maung Swan Yi
D Let Myo - Poem
ဖြတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ၂၃ နှစ် ရှိခဲ့ပြီ